Coaxial Pigtail Ingaas Photodiode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Coaxial pigtailed လေဆာ diodes > Coaxial Pigtail Ingaas Photodiode
Coaxial Pigtail Ingaas Photodiode ၏အကျဉ်းချုပ်
၂။ Coaxial Pigtail Ingaas Photodiode ၏နိဒါန်း
၃။ Coaxial Pigtail Ingaas Photodiode ၏အင်္ဂါရပ်များ
အကွာအဝေး 1100nm-1650nm detect;
Coaxial အထုပ်, လေဆာဂဟေ;
၄။ Coaxial Pigtail Ingaas Photodiode ကိုအသုံးပြုခြင်း
analog optical လက်ခံ;
Coaxial Pigtail Ingaas Photodiode ၏ Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25â„) ။
လှိုင်းအလျားအကွာအဝေး λ 1100 - 1650 nm
တာဝန်ယူမှု R ကို VR = 5V, Î» = 1310nm 0.85 0.90 - A / W
VR = 5V, Î» = 1550nm 0.90 0.95 -
လက်ရှိအမှောင်ထု ID Vr = 5V - 0.2 0.5 nA
စွမ်းရည် C Vr = 5V,f= 1MHz, ကိစ္စတွင်ပွင့်လင်း - 0.6 0.75 pF
အချိန်ထ / ကျဆုံးခြင်းအချိန် TR / TF Vr = 5V, 10 ~ 90% - - 0.3 ns
Bandwidth BW Vr = 5V, ခဲနှင့်အတူ50â'load
အရှည် = 6mm, အမှုဖွင့်လှစ် 2.5 - - GHz
ပေါင်းစပ်ဒုတိယအမိန့်ကိုရိုက်တယ် CSO - - -70 - dB
ပေါင်းစပ်တတိယအမိန့်စည်းချက် CTB - - -80 - dB
operating ဗို့အား V - - -5 - V
optical ပြန်လာဆုံးရှုံးမှု ORL Î» = 1310nm - 45 - dB
Coaxial Pigtail Ingaas Photodiode ၏ 6. Package drawing & PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - mm)
၇။ Coaxial Pigtail Ingaas Photodiode ကိုပို့ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
Q: PIN နံပါတ်ကဘာလဲ။
A: B အမျိုးအစား၊ B အမျိုးအစားလား။
Q: connector ကိုများအတွက်လိုအပ်ချက်ကဘာလဲ?
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ်သည်၊
1350nm Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်